UJames Buchanan Nguye kuphela uMongameli ongakathatanga
UMongameli kuphela we-Bachelor, uMongameli uMeyi ube ngu-Gay oyedwa kuphela
U-James Buchanan Mhlawumbi uye waba nobulili ngokwesini
Akukaze kube ngumongameli ovulekileyo wase-United States, kodwa ezinye iimbali-mlando ziye zatsho ukuba uJames Buchanan , umongameli kuphela ongazange abelane ngeNdlu eNtsundu kunye noMninimzi Wokuqala , unokuba nomdla kwilungu elifanayo.
Umongameli wesi-15 ngumongameli kuphela we-bachelor president. UBuchanan wayebandakanyeke kumfazi ogama linguAnn Coleman, ixesha elide ngaphambi kokuba abe ngumongameli, kodwa uCleman wafa ngaphambi kokuba abatshatile.
Bekungayi kuba yinto engavamile ukuba benze njalo ukuze iimbali zizaliswe ngamadoda angqingili abatshatileyo abafazi.
Abahlobo bexesha elide
Ngoxa wayehlala engatshatanga ubomi bakhe bonke, uBuchanan wayenebudlelwane obusondeleyo kunye noWilliam Rufus De Vane King, idiplomate eyayikhonza njenge-senator yase-United States kunye ne-vice-president yesizwe-13, ngokukodwa umongameli wongameli ongatshatanga.
UBucan noKumkani bahlala ndawonye iminyaka engaphezu kwemashumi mabini, nangona oko kwakungeyona ndlela eqhelekileyo kwiminyaka ye-1800. Nangona kunjalo, izazi-mlando ziqaphele ukuba abahlali bexesha elidlulileyo eWashington babecelwa ukuba bachaza uKumkani njenge-effeminate, bembiza ngokuthi "Miss Nancy" kunye noBuchanan "isiqingatha esingcono."
Baphinda babhale iileta ezibhalwa nguBuchanan malunga nendoda echaza njengomphefumlo wakhe. Emva kokuba uKumkani ashiye eUnited States ukuba abe ngumphathiswa eFransi, uBuchanan wabhalela umhlobo:
"Ndiye ndedwa kwaye ndedwa, ndingenalo mlingane kunye nendlu kunye nam. Ndiye ndabuya kumadoda amaninzi, kodwa andiphumelelanga nayiphi na into. Ndicinga ukuba akulungile ukuba umntu abe yedwa; akufanele ngimangaliswe ukuba ndifumene nditshatile kumnye umkhonzazana omdala onokuncedisa xa ndigula, ndibone ukutya okulungileyo xa ndiphila kakuhle, andilindele ukuba ndibe nomsindo okanye uthando. "
U-King wabonisa uthando lwakhe ngoBucan ekuhambeni kwakhe ngokubhalela kuye: "Ndizibugovu ngokwaneleyo ukuba ndiqinisekile ukuba awukwazi ukufumana umntu oza kukubangela ukuba ungazisoli ngokuhlukana kwethu."
UmBhali-mlando wenza ibango lakhe
UJames Loewen, owaziwayo weMelika kunye neembali-mlando, uye wavakalisa ukuba uBuchanan wayengumongameli wokuqala we-gay, ebhala inqaku le-2012:
"Akungabazeki ukuba uYakobi Buchanan wayengumlingani, ngaphambi, ngexesha, nangemva kweminyaka emine kwiNdlu eNtshonalanga. Ngapha koko, isizwe sazi, naye-wayengekho kude nakwikheritta. Ufunde lo mbandela kwaye ucinga ukuba uBuchanan wayeyintlubano. "
U-Loewen uphikelele ukuba ubungqingili bukaBuchanan abuxubusha ngokuphindaphindiweyo ngamaxesha anamhlanje kuba amaMerika afuni ukukholelwa ukuba uluntu lubekezelela ubudlelwane bezesini kwi-19th Century kunokuba bekhona ngoku.
Omnye umviwa we-Bachelor Presidential Candidate
Owona osondeleyo uhlanga luye lwaba nomongameli we-bachelor ukususela ngoBuchanan xa uRepan Republic yase-US Sen Lindsey Graham waseSouth Carolina efuna ukhetho lomongameli we-party ngo-2016. Xa ebuzwa ukuba ngubani oza kuba ngumfazi wakhe wokuqala, uGraham uthe isikhundla siya kuba "sijikeleze. "U Wadla ukuba udade wakhe unokudlala indima, ukuba kuyimfuneko.
Oyedwa kunye kuphela?
Nangona sele ixela ukuba uRichard Nixon wayenobungqingili kunye nomhlobo wakhe osenyongweni uBebe Rebozo, uBucanan usenokuba ngumviwa wokuqala, kunye nomongameli waseMerika wase-gay.
Ngombulelo wenkxaso yakhe yegama lomtshato wengqungquthela, uMongameli uBarack Obama wafumana isihloko ngokufutshane, nangona kunjalo, kwinqaku leMagazini ka-Meyi 2012 le-Newsweek, elibhalwa ngu-Andrew Sullivan.
U-Tina Brown, umhleli-ntloko kwi-Newsweek ngelo xesha, wachaza igama kunye nesigqubuthelo se-Obama kunye ne-halo rainbow ephakanyiswe phezu kwentloko ngokuxelela iindaba ze-Politico kwi-website, "Ukuba uMengameli uClinton ' wayengumongameli wokuqala omnyama' kunye noB Obama ufumana yonke imizobo kule 'gaylo' ngesigqibo sokutshata komtshato wesonto elidlulileyo. "
Kwinqaku yakhe, uSullivan ngokwakhe ubonise ukuba ibango alizange lithathwe ukuba lithathwe ngokoqobo (Obama utshatile, kunye neentombi ezimbini). "Ngokusobala umdlalo kuClinton ungumongameli wokuqala omnyama. Ndiyazi ukuba uJacob Buchanan (mhlawumbi noAbraham Lincoln) baye bahlala kwiOval Office ngaphambili."
Biography yaseMelania Trump
Yintoni eyenziwa nguLobbyist?
Umzalwana Omkhulu - uMzalwana oThinner
Kuthiwani NgezoMicandelo leeNzuzo zoNyango?
Umgangatho wokuqala okanye wesibini?
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi "Gcina"
I-Rocket Ukuzinza kunye neeNkqubo zokuLawula iiNqwelo
I-Saint Thomas Aquinas College Admissions
Ukuqwalasela ngokuthe ngqo
Indlela yokucoca i-Eraser
Ukuziyeka kuphela Imfundo kunye neMfundo yezoTyala e-US
Babe uRuth kwiBalo, ngo-1900-1940
Iilwimi zesiTaliyane zidibeneyo: I-Rilassarsi